–निनाम कुलुङ ‘मंगले’/ नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयमातहत रहेको पर्यटन विभागलाई उद्घृत गर्दै ‘शिखरपोस्ट अनलाइन न्युजपोर्टल’ले गत माघ तेस्रो साता प्रकाशित गरेको एक समाचारअनुसार यो वर्षको जाडो मौसम (विन्टर सिजन) मा पनि १० वटा विदेशी पर्वतारोहण दलका ४५ जना सदस्यहरु नेपालका विभिन्न हिमालहरु आरोहण गर्न गएका छन् । सौभाग्यवश त्यसमा आठ हजार मिटरभन्दा माथिको मनास्लु हिमाल पनि परेको छ । स्मरणीय छ, ८ हजार १६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल आरोहण गर्न यो वर्षको जाडो मौसममा दुई आरोहण दलका १४ जना पर्वतारोहीहरु मनास्लुतर्पm गएका छन् । बाँकी आठ वटा हिमालहरु आरोहण टोलीले भने ५ हजार ७ सय मिटरभन्दा अग्लो लुजा पिक लगायत हिमालहरु चढ्ने छन् । यी हिमाल चढेवापत विदेशी पर्वतारोहीहरुले नेपाल सरकारलाई राजस्व (रोयल्टी) मात्रै लगभग नौ लाख ८ लाख ९६ हजार पाँचसय नेपाली रुपैयाँ तिरेका छन् । जे होस्, यो लेखमा विश्वका अग्ला १४ वटा हिम चुचुराहरु कसले चढे÷कहिले चढे ? ती हिमालहरु कहाँकहाँ छन् ? आदि बारे छोटकरीमा लेख्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसो त निकट निकट भविश्यमै आठ हजार मिटरभन्दा माथिका अरु ६ वटा हिमालहरु थप हुँदैछन् । सौभाग्यवश थपिने ती ६ वटै हिमाल नेपाली सरहदभित्र रहेका छन् ।
जे होस्, विश्वकै अग्ला १४ वटा हिम चुचुराहरु कसले÷कहिले चढे ? ती पर्वतारोहीहरु कुन–कुन देशका थिए ? ती १४ वटा अग्ला हिमाल कहाँकहाँ छन् ? यहाँ छोटकरीमा चर्चा गरिने छ । विश्वका ती आठहजार मिटरभन्दा माथिका सबै अर्थात् १४ वटै हिम चुचुराहरु एसिया महादेशको हिमालय पर्वतमाला भएर पश्चिमदेखि पूर्व फैलिएको छ । त्यस मध्ये एक तिहाई भाग नेपाल भएर जान्छ । स्मरणीय छ, हिमालय पर्वतमालाको एक तिहाई भागमै विश्वका अग्ला हिम चुचुरो सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमादेखि लिएर हालसम्मको आठहजार मिटरमध्ये कम उचाईको हिमाल सिसापाङ्मा (उचाई ८,०१३ मिटर भएको) सम्म रहेका छन् । विश्वकै अग्लो हिम चुचुरो सगरमाथा अर्थात् चोमोलुङमा (८,८४८ मिटर) हो भने हो भने, सन् १९५३ मे २९ मा न्युजिल्यान्डका एडमण्ड पर्सिभल हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक चोमोलुङमा चढे ! विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल काराकोरम–२ (के–टु÷काराकोरम–२) हो । यो हिमालको उचाई ८,६११ मिटर हो । यो हिमाल सन् १९५४ को ३१ जुलाईमा इटालीयन आरोहीद्धय एकिले कोम्पाग्नोनी र लिनो लेसडेल्लीले पहिलोपटक सफलतापूर्वक चढेका थिए ।
विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा (सेवालुङ÷सेन्छेलुङ) हो । यो नेपाल पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किम तथा दार्जिलिङको सीमामा रहेको छ । यसको उचाई ८,५८६ मिटर हो । यो हिमाललाई बेलायका पर्वतारोहीहरु जर्ज ब्यान्ड र जो ब्राउनले पहिलोपटक चढेका थिए । विश्वको चौथो अग्लो हिमाल ल्होत्से÷चे हो । यसको उचाई ८,५१६ मिटर हो । यो हिमालको प्रथम आरोहण सन् १९५६, मे १८ मा भएको थियो । स्वीटजरल्यान्डका पर्वतारोहीहरु फ्रिट्ज लुसिंगार र अर्नेस्ट रेइस्टले पहिलोपटक आरोहण गरेका थिए । त्यस्तै वश्वको पाँचौं अग्लो हिमाल मकालु (सेसेलुङ) हो । यसको उचाई ८,४६३ मिटर रहेको छ भने जिन कोजी, लियोनल टेरे, जिन फ्रान्का, गुइडो म्याग्नान, जिन बोउभियर, सेर्गीकोप, पियरे लेरोक्स लगायत फ्रेन्च र नेपाली ग्याल्जेन नोर्बु लगायतको एक जन्ती टोलीले नै चढेका थिए । त्यस्तै विश्वको छैठौं अग्लो हिमाल चो–ओयु हो । यसको उचाई ८,२०१ मिटर रहेको छ । सन् १९५४ अक्टोम्बर १९ मा अस्ट्रियन नागरिकद्धय हर्बर्ट टिची र सेप जेक्लर र नेपाली पासाङ दावा (लामा) शेर्पाले पहिलोपटक आरोहण गरेका थिए ।
विश्वको सातौं अग्लो हिमाल हो –‘धौलागिरी’ । यसको उचाई ८,१६७ मिटर हो भने, सन् १९६० को, १३ मे मा स्वीटजरल्यान्डका पर्वतारोहीहरु कुर्ट डिम्बर्गर, पिटर डियनर, अर्नेस्ट पोर्म, एलेन सेल्बर, माइकल फोउजर र ह्युगो बेबर, नेपाली आरोहीद्धय नावाङ शेर्पा र निमा शेर्पाले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । त्यस्तै विश्वको आठौं अग्लो हिमाल मनास्लु हो । यसको उचाई ८,१६३ मिटर हो । मनास्लु हिमालको पहिलो आरोहण सन् १९५६ मे ९ मा जापानका पर्वतारोहीत्रय तोशीमो इमानिशी, किइसिरो कातो र मिनोरु हिगेता तथा नेपाली ग्याल्जेन नोर्बुले गरेका थिए । एवम् रीतले विश्वको नवौं अग्लो हिमाल नांगा पर्वत हो । यो हिमालको उचाई ८,१२६ मिटर हो । यो हिमाल पाकिस्तानमा रहहेको छ । अस्ट्रियन पर्वतारोही हर्मन बुह्लले सन् १९५३, जुलाई ३ मा पहिलोपटक चढेका थिए ।
साथै विश्वको १० औं अग्लो हिमाल अन्नपूर्ण–१ हो । यो हिमाल नेपालमा रहेको छ भने यसको उचाई ८,०९१ मिटर रहेको छ । फ्रान्सका पर्वतारोहीद्धय माउरिस हर्जोग र लुइस लाचेनलले सन् १९५० जुन ३ मा पहिलोपटक सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए । एवम् प्रकारले विश्वको ११ औं अग्लो हिमाल गासेरब्रुम–१ हो । यो हिमाल पनि पाकिस्तान–चीन सीमामा रहेको छ । यसको उचाई ८,०८१ मिटर रहेको छ भने यो हिमालको आरोहण सन् १९५८ जुलाई ५ मा अमेरिकन पर्वतारोहीद्धय एन्ड्रयु कोउफम्यान र पिट स्कोइन्ङले गरेका थिए । विश्वको १२ औं अग्लो हिमाल ब्रोडपिकतानमै रहेको छ भने यसको उचाई ८,०५१ मिटर हो । यो हिमालको सफल आरोहण सन् १९५७ जुन ९ मा भएको हो । त्यो वेला अस्ट्रियन पर्वतारोहीहरु फ्रिट्ज विन्टरक्टेलजर, मार्कसुक स्मुक, कुर्ट डेइम्बर्ग हर्मन बुलले चढेका थिए । विश्वको १३ औं अग्लो हिमाल गासेरब्रुम–२ हो । यो हिमाल पनिपाकिस्तानमा नै रहेको छ भने, यसको उचाई ८,०३५ मिटर हो । सन् १९५६ को जुलाई ७ मा जोसेप लार्क, फ्रिट्ज मोर्भल र हान्स विलेन्डपार्टले सफलतापूर्वक चढेका थिए । विश्वको १४ औं र आठहजार मिटरको अन्तिम अग्लो हिमाल हो ‘–सिसापाङमा ।’ यो हिमालको उचाई ८,०२७ मिटर रहेको छ । यो हिमाल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालको सीमानामा रहेको छ । खासमा नापजाँच गर्दा र भूगोलको आधारमा यो हिमाल नेपाली भूमिमा पर्छ भने नेपाली (खस÷पर्वते) भाषामा यसको नाम गोसाईँनाथ हो । तर, चीनले आप्mनो देशमा विश्वकै अग्लो हिमाल चोमोलुङमा (सगरमाथा) नपर्ने भएपछि (किनभने पानी–ढलोको आधारमा विश्वकै अग्लो हिमाल चोमोलुङमा-सगरमाथा नेपालमा पर्छ÷परेको हो ।) भलै यसमा दुवै देश (चीन–नेपाल) ले आ–आप्mनो भनी दावी छाडेका थिएनन् ।
विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा नेपालमा परेपछि ‘सिसापाङमा’ चीनमा पर्ने गरी राजनीतिक रुप सहमति भएको मानिन्छ । जे होस्, यो हिमाल सन् १९६४ मे २ मा १० जना चिनियाँ पर्वतारोहीहरुको जम्बो टोलीले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २९ माघ २०७७, बिहीबार ११:१४